Apple inogadziridza Safari yeOS X Yosemite | Ndinobva mac
Safari yeMac inogadziridzwa isati yatanga OS X El Capitan
Vakomana vanobva kuCupertino vanoramba kuvhurwa kweOS X El Capitan uye zvisati zvaitika ivo vanotisiya kuti titore Safari yekuvandudza, mu iyi kesi Safari 9.0 yevanoshandisa OS X Yosemite. Pamberi peSafari, shanduro dzinoverengeka dzeIOS 9 dzakaburitswawo kune vese vanogadzira uye vhezheni 9.0.2, iyo inogadzirisa mamwe madhigi nemabhugi anowanikwa mushanduro 9.0.1.
Apple inoenderera ichiratidza kufarira kugadzirisa iOS 9 uye izvi zvinoratidzwa nemutero wekuvandudzwa, asi vashandisi veMac vanoda kuona vhezheni itsva yeOS X El Capitan patafura, netarisiro havazotora nguva yakareba kuti vauye nayo ku pamberi. Kazhinji kuvhurwa kwerudzi urwu kunowanzobuda nguva dza19: XNUMX masikati muSpain, asi ino nguva nekuda kwekutanga kweIOS uye iyi vhezheni yeSafari yeOS X Yosemite iri kunonokerwa kupfuura zvakafanira.
Iko kuvandudzwa kwakaitwa mukati iyi vhezheni yeSafari iri kunyatsonakidza uye ivo vanowedzera iyo kutonga kunyarara odhiyo mumatebhu browser, yekuwedzera sarudzo dzekuona dzeSafari Reader, uye yekuvandudza AutoComplete chishandiso. Iwo ekuvandudza kwakanaka chaizvo uye isu tine chokwadi chekuti vashandisi vanozozvikoshesa zvakanyanya asi ikozvino yave nguva yeiyo nyowani Apple software, usaite kuti titambure zvakanyanya 🙂
Takamirira kuburitswa kweOS X El Capitan uye ino gadziriso inogona kunge iri yapfuura, saka ramba wakatarwa nekuti tave pedyo nekuve neOS X El Capitan 10.11 inowanikwa muMac App Store uye kuti vanoburitsa zvidzore izvi kare kuMac software chete inogona kukonzeresa kuzadza mumaseva ekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » OS X Yosemite » Safari yeMac inogadziridzwa isati yatanga OS X El Capitan
Iyo iri kunze uye inogona kutorwa pasi.
Hapana munhu akataura chero chinhu nezve dambudziko pakati peIOS 9 neMAC OSX ine airrop? Ini handikwanise kutumira mafaera kubva ku iphone yangu 6 kuenda kumac uye ini ndatoona zvichemo zvakawanda kubva kuvanhu kuti chinhu chimwe chete ichi chinoitika.
Zvakanaka, isu takaona iro dambudziko asi isu tichaongorora nyaya yacho, maita basa nekutizivisa!
Mhoroi, ndine dambudziko pandinovhura safari pane yangu mac, inovhura zvakanaka pasina dambudziko, asi kana ndichida kutsvaga chimwe chinhu mugoogle kana chero imwe peji, chinovharwa uye hachindibvumidze kunyora, kana uchigona kubatsira ini. Ndatenda.
Pindura kuna franiker
Apple Zvemutemo Inosunungura OS X El Capitan 10.11